महाधिवेशनको भीडमा बेपत्ता छोराहरू खोजिरहेका भीमबहादुर | Enepal Patra Pvt. Ltd.
काठमाडौँ, १३ पुस । झापाका भीमबहादुर बस्नेतले जीवनको सात दशकको यात्रामा अनेकन हण्डर ठक्कर व्यहोर्नुभयो । जीवन व्यवहार सिक्नुभयो । तर, कहिल्यै निराश भने हुनु परेन । पाँच भाइ छोरा जन्मँदा उहाँलाई संसारकै सबैभन्दा बढी खुशी मिलेको थियो । किनकि, प्रकृतिको वरदानरुपी सन्तान कुनचाहिँ बाबुलाई घटीबढी लाग्ला र ?
आफूलाई भन्दा बढी माया गरेको छोराहरू सामन्ती सत्ताले बेपत्ता पारिदिँदा कुन बाबु चैनले निदाउन सक्ला र रु भीमबहादुरलाई पनि यस्तै भएको थियो । माइलो पुष्पराज र कान्छो धीरेन्द्र बस्नेत विसं २०६० मङ्सिरदेखि बेपत्ता छन् । न त लाश देखियो, न तिनको सास नै भेटियो । सत्ताका विरुद्ध आवाज उठाएकै कारण, राज्यका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा बोकेकै कारण बेपत्ता पारिएका छोराहरूले रोजेको बाटो अँगाल्न एउटा बाबु अभिशप्त भयो ।
राजधानीमा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन चलिरहेको छ । महाधिवेशनमा त्यही पीता भीमबहादुर पनि सल्लाहकार समितिको सदस्यका रूपमा प्रतिनिधिका रूपमा उपस्थित छ । महाधिवेशनमा साइलो छोरा सुरेन्द्र र काइलो वीरेन्द्र पनि सँगै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । उपत्यका विशेष प्रदेशको सचिवका रूपमा सुरेन्द्र महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । अखिल ९क्रान्तिकारी०को पूर्वउपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र । यस्तै क्रान्तिकारीको महासचिवको भूमिका निर्वाह गर्नुभएका वीरेन्द्र प्रदेश नं १ को प्रदेश सदस्यसँगै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ ।
माओवादी झण्डामा विद्रोहको गीत गाउन लगाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि त्यस्तै आशा थियो । तर राजनीति चक्रव्यूहमा फसेपछि न त बेपत्ताहरू पmर्किएर आए, न शान्ति सम्झौतामा भनिएको ६० दिन नै आयो ।
सोमबार अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आजदेखि समूहगत छलफल हुन लागेको छ । सो छलफलमा समेत भीमबहादुरले आफ्ना यस्तै धारणा राख्ने सोच बनाउनुभएको छ । त्यसो त अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनमा सहिद, बेपत्ता योद्धालाई सम्मान गर्न सबै स्तरका पार्टी समिति, जबस मोर्चा विभागले नियमित कार्यक्रम गर्नुका साथै आ–आफ्नो ठाउँबाट राज्यको तर्फबाट समेत समुचित सम्मानको व्यवस्थाका निमित्त दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
दाइ र भाइले रोजेको मुक्तिको बाटोमा नै हिँडिरहनुभएका सुरेन्द्र र वीरेन्द्रसँगै पिता भीमबहादुरको एउटै आश छ माओवादी माओवादी नै रहिरहोस् । जनताको अग्रदस्ता बनिरहोस् । परिवर्तनको एजेण्डा बनिरहोस् । जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन ल्याओस् । आठौँ महाधिवेशनले त्यही दिशानिर्देश गरोस् । के भीमबहादुरहरूजस्तै छोराछोरी बेपत्ता पारिएका मातापिताले कहिलेसम्म आँशु पिएर बाँच्नुपर्ने हो ? माओवादी नेतृत्वले कहिले देला चित्तबुझ्दो जवाफ रु सवाल जति महत्वपूर्ण छ जवाफ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
प्रकशित मिति : 2021-12-28